Dhacdo Qosol leh oo ku saabsan dhibaatada Guurka Maxlalka!! | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: March 10, 2014, 10:42 am
Warbixin lagu qoray Wargeyska Al-Ra’yi ee Kuwait kasoo baxa ayaa waxaa lagusoo bandhigay Sheeko Qosol badan oo ku saabsan Guurka loo yaqaan Maxlalka oo Culimada Islaamku intooda badan ay Xaaraan ku sheegaan.
Guurkan wuxuu ku yimaadaa Nin Xaaskiisa Saddex Dalqadood ku furay oo doonaya inuu mar kale Guursado, kaas oo Nin kale kulasoo heshiinaya inuu Nikaaxsado Gabadhaas dabadeedna uu furo, si Ninkii hore uu Fursad kale Guurka Gabadha ugu helo.
Sheekadan waxay ka dhex dhacday Nin iyo Haweeney Yemen u dhashay, Ninkuna waa Dhagoole aan Hadli karin, oo Saboolna ah, kaasoo aan Waligiis Xaas yeelan.
Dhagoolaha ayaa Nasiib u yeeshay inuu Guursado Gabadh Qurux badan oo 28 jir ah Wiilna horay usoo dhashay, taasoo Ninkeedii ay Saddexda Sano is qabeen uu Saddex Dalaaqo ku furay.
Arooska Dhagoolaha iyo Gabadhan wuxuu ku dhacay Heshiis Maxlal ah oo uu Maal-galintiisa bixinayo Ninkii horay u qabay Gabadha, si Dhagoolaha uu Nikaaxa ka dib mar kale u furo Haweeneydan oo iyadana diyaar u ahayd inuu Ninkeedii ay Cunuga u dhashay dib ugu noqsado.
Ehelada Ninka Dhagoolaha ah ayaa lagasoo xigtay in Wiilkooda uu ka biya diiday inuu furo Gabadhii Maxlalka loogaga dhigay, isagoo ku adkeysanaya inaanay arrintaasu Sharci ahayn.
Ninkii Maalka badan ku bixiyay in Xaaskiisa loo maxlalo ayaa Garsoorka u dacwooday, waxaase loo sheegay in Heshiiskaas uu Dhagoolaha la galay markii horaba uu Xaaraan ahaa, sidaas awgeedna ay Gabadhu iminka Xaas u tahay Ninka Dhagaha la’, qasabna aan looga furi karin.
Waxay dhacdadan noqotay mid laga hadal hayo Deegaanka Bani Xaarith oo Magaalada SANCA ee Dalka Yemen ka tirsan.
Muslimiinta oo ka digay Filim dhawaan lasoo saarayo!! (Muxuu yahay bal Wax Ka Ogoow)